Ciidamo kala dhex-galay Maleeshiyo beeleed uu dhexmaray Dagaal khasaaro dhaliyey. | Dayniile.com
Home Warkii Ciidamo kala dhex-galay Maleeshiyo beeleed uu dhexmaray Dagaal khasaaro dhaliyey.
Dagaal u dhexeeyay laba maleeshiyo beeleed oo hubeysan ayaa gelinkii dambe ee shalay ka dhacay deegaanka Xananbuure ee Gobolka Galgaduud ee Maamulka Galmudug, kaasi oo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Dagaalkan ka dhacay Xananbuure ayaa salka ku haayay aanooyin qabiil oo horey uga dhacay deegaankaas, waxaana wararka saaka laga haelayo Xananbuure ay sheegayaan in xaaladda ay degan tahay, kadib dagaalkii dhacay.
Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa Gorgor ayaa ku baxay Colaada kasoo cusboonaatay deegaanka Xananbuure, iyagoona kala dhex-galay maleeshiyo beeleedka ku dagaalamay deegaankaas.
Saraakiisha hoggaamineysa Ciidamada Gorgor iyo kuwa Maamulka Galmudug ayaa sheegay inay ku guuleysteen joojinta dagaaladii dhacay, isla markaana kulamo wadahadal la yeelan doona Waxgaradka iyo Odayaasha dhaqanka maleeshiyaadka.
Sidoo kale Saraakiisha Ciidamada ayaa doonaya inay heshiis kala dhex dhigaan maleeshiyo beeleedka hubeysan ee ku dagaalamay deegaanka Xananbuure ee Gobolka Galgaduud, waxaana saaka degan xaaladda deegaanka.
Si kastaba deegaano ka tirsan Gobolada Mudug iyo Galgaduud ayaa waxaa muddooyinkii dambe ku soo laab-laabtay dagaal beeleedyo iyo dilal qorsheysan oo la xiriira aanooyin qabiil, iyadoona Colaadaha qaarkood heshiis laga gaaray, halka kuwo kalena aan weli xal
Daawo Muqaalka Office Nairobi kenya
Previous articleNin 42 sano ka dib u soo noqday labadiisa xaas balse kala kulmay arrin niyad jab ku riday
Next articleMidoiwga Musharaxiinta oo war ka soo saaray Qilaafka Farmaajo iyo Rooble